Ngwunye igwe cnc rawụta Flọ ọrụ, Ndị na - eweta ya - China Cnc router machine Manufacturers
1325 anọ nwere akara ...
Economic mẹrin usoro R4 wo ...
Ihe ohuru ohuru gbara okpukpo uzo ATC…
6090 mini osisi cnc rawụta igwe
Seriesdị usoro a dị ike ịrụ ọrụ, dị mfe iji, na-adịgide adịgide ma bụrụ nke a pụrụ ịtụkwasị obi, a na-ejikwa ya n'ọtụtụ ebe na nhazi nke akara mgbasa ozi dị iche iche, aha aha, baajị, akàrà, akara, ụdị ụkpụrụ ụlọ, ogwe aka, ngwaahịa osisi na ngwaahịa ndị ọzọ. Enwere ike ịkpụ ya na akwụkwọ mmado, ọla kọpa, aluminom, metal stool metal ma ọ bụ ihe ndị na-abụghị ọla.
Mgbasa ozi 1212 cnc router mahcine
Uzo mgbanwe ngwa ngwa nke ihe osise ahu di n’elu moto. Ihe nhazigharị onwa na-agba ọsọ dị puku kwuru puku ka puku iri atọ ruo puku atọ n'otu nkeji. Ọ bụrụ na-agbaghị agba ọsọ a ma ọ bụ na mgbazigharị ọsọ dị obere, yabụ ngwa ọrụ nke igwe ihe a ka amachibidoro ya n'ihi na a ga-etinye ihe dị iche iche site na iji ngwa isi dị iche iche.
136 osisi cnc rawụta igwe
Ejiri igwe cnc nke 1325 mee ihe bu ihe eji egbu osisi na ịbe ya. Ọ bụghị naanị imepụta ngwaahịa dị iche iche 2d ewepụghị nwere ike imepụtakwa 3d ngwaahịa. N'ihi na igwe eji agba osisi nke 1325 nwere ike ekewa n'ime 3 axis na igwe axis 4, ọ nwere ike gboo mkpa mmepụta dị iche iche nke ndị ahịa. N'okpuru ebe a bụ foto nke igwe igwe abụọ ahụ.